Chhaharaa | कांग्रेसलाई गन्तव्यहिन यात्रामा धकेल्ने प्रयास
कांग्रेसलाई गन्तव्यहिन यात्रामा धकेल्ने प्रयास
अनायास प्रधानमन्त्री ओलिको संसद विघटन र मध्याबधी निर्बाचनको अविवेकी र अदुरदर्शी कदमले एका÷एक राजनीतिमा तरङ्ग ल्यायो । प्रधानमन्त्री ओलिको उक्त कदम अविवेकी र अदुरदर्शी त हो नै, त्यो भन्दा पनि अझ भयानक असंवैधानिक र अलोकतान्त्रिक कदमको रुपमा लिइएको छ । यसै सिलसिलामा प्रतिपक्ष दल नेपाली काङ्ग्रेस देख्दा एकैमत जस्तो देखिए पनि भित्री रुपमा मतान्तर छ भन्ने कुरा बाहिर सुन्न पाइन्छ । त्यस्तो मत भिन्न्ता हुनुपर्ने कुनै कारण देखिदैन तर जबर्जस्त मत भिन्नता देखाउन खोजिएको छ । सामान्यतय नेपाली काङ्ग्रेस देशको प्रमुख लोकतान्त्रिक पार्टीले मध्याबधी निर्वाचनमा जान अनकनाउन पर्ने होइन तर पनि पार्टीको एउटा तप्का चुनाबसङ्ग तर्सिए जस्तो देखिदै छ । एउटा सत्य के हो भने प्रधानमन्त्री खड्ग प्रसाद ओलिको कदम असंवैधानिक र अलोकतान्त्रिक त हुँदै हो । यसमा पार्टीमा कुनै फरक धारणा आएको देखिदैन र छैन पनि । तथापी काङ्ग्रेस भित्र अन्तरबिग्रह ल्याउने कुत्सित मनसायले अनर्गल प्रचार गरिदैछ । नेपाली काङ्ग्रेस निश्चय पनि संबैधानिक सर्बोच्चता, विधिको शासन र कानुनी राज्यको आधारभुत मान्यता बोकेको पार्टी हो, त्यो घेरा देखि बाहिर जान सक्दैन । यसर्थ सर्बसम्मत रुपमा विघटित प्रतिनिधिसभा पुर्नस्थापनालाई उच्च–प्राथमिकता दिएको तथ्य जगजाहेर नै छ । यति हुदाहुदै पनि फेरि पनि के को शंका र उपशंका भन्ने प्रश्न उठिरहेको छ । पार्टी सभापती शेर बहादुर देउवा नै त्यस्तो नेता हो जस्ले प्रतिनिधि सभा विघटनको लगत्तै उक्त कदम असंबैधानिक र अलोकतान्त्रिक भनी बक्तब्य निकाल्ने पहिलो ब्यक्ति नै उहाँ हो । तर नेपाली काङ्ग्रेसलाई फुटाउने र अराजकता तिर धकेल्ने अदृश्य शक्ति पार्टी सभापतिको असल नियतलाई बग्याइ÷टिङ्याइ प्रचारबाजी गरिरहेका छन् । यो नियोजित षड्यन्त्रको तानाबाना कुन अँध्यारो कुनाबाट बुनि राखिएको छ भन्ने कुरा को खोजी हुनुपर्ने देखिन्छ भने पौडेल समूहको नामबाट परिचित नेताहरु यस्ता अनर्गल हर्कतबाट सचेत हुनुपर्ने देखिन्छ । देशको राजनितिक अबस्था तरलता भएको स्थितीमा यस्ता अनर्गल होहल्लाहरु हुने गर्दछन र त्यस्तो अनिश्चयको अबस्थामा धमिलो पानीमा माछा मर्नेहरु दाउ हेरेर बसेको हुन्छ । एउटा ठुलो सत्तारुढ दल त करिब फुटको सङघार पुगिसक्यो अब काङ्ग्रेसमा त्यस्तै देख्ने सपना बोकेकाहरु संस्थापन इतर(पौडेल) समूहलाई उचालेर काङ्ग्रेसमा पनि बिभाजन ल्याउने षडयन्त्र भएका नहोलान भन्न सकिन्न । पछिल्लो राजनैतिक घटना क्रमलाई हल्का रुपले बुझ्ने र सतही विश्लेषण गर्दा नेपाली काङ्ग्रेस पनि गम्भीर संकटमा पर्न सक्ने खतरा टड्कारो रुपमा खडा भएको अनुमान गर्न सकिन्छ । प्रतिनिधि सभाको विघटन र मध्याबधि निर्बाचनको घोषणाले कहि–कहि मुलुकको राजनितिक स्थायित्वलाई नकारात्मक प्रभाब पारेको प्रष्ट छ । यहि अस्थिरता बिच राजनितिक लाभ लिन हिजका यथास्थितिबादीहरुको सल्बलाहटले स्पष्ट गरेकै छ । तिनै शक्तिहरु(प्रतिगामी)का जानीनजानी कतै मतियार भएर आफ्ना पार्टी सभापतिलाई अनुचित शंकाको घेरामा मात्रै होइन कुप्रचारहरु समेत भइरहदा धेरै अबिश्वासको खाडल पैदा हुनु स्वभाबिक हो । सभापति माथि शंका गरि रहदा आफू प्रति पनि त्यस्तै आशंका गरेका हुन सक्छन् भन्ने हेक्का रहोस । पौडेल समूहका नेता रामचन्द्र पौडेलको एउटा लामो इतिहास छ । अरुको लहैलहैमा लागेर आफ्नो इतिहासमा अरुलाई दाँइ हाल्न दिनुबाट जोगिनु बुद्धिमानी ठहरिन्छ । अहिले हरेक पार्टीमा यहि समस्या छ । अझ विशेष गरेर प्रमुख राजनितिक दल नेकपा(नेकपा) र नेपाली काङ्ग्रेसमा धेरै बाहिरियाहरुको घुसपैठको संभावना प्रबल देखिन्छ । अन्योलपुर्ण राजनीतिमा सामान्यतया “धमिलो पानीमा माछा मार्नेहरु” निकै सचेततापुर्बक लागेका हुन्छन् । यो यथार्थतालाई समयमा नै चिर्न सकिएन भने निस्सन्देह परिवर्तनकारी राजनीतिक शक्तिहरु यो क्षितिजबाट तिल्मिलाउने दिनहरु नआउलान भन्न सकिन्दैन । यस्तै अस्थिरतामा नै प्रतिक्रान्तिका दाह्रा नङ्ग्राहरु देखिने बेला हो । यसको गम्भीर विश्लेषण नगरी एक÷अर्कालाई समाप्त गर्छु भन्ने तिर लागियो भने त्यो भन्दा अर्को दुर्भाग्य र बिडम्बना केही हुने छैन ।
बर्तमान अबस्थामा अब नेपाली काङ्ग्रेस बिकल्प रहित यात्रामा लाग्ने कि बिकल्पलाई पनि ध्यान दिने भन्ने प्रश्न खडा भएको छ । यस्तो गम्भीर राजनैतिक संकटको घडीमा एक पटक काङ्ग्रेसको गौरबशाली इतिहासलाई स्मरण गर्दै आगामी दिनको यात्रा तय गर्नु श्रेयस्कर हुन्छ । झट्ट हेर्दा असंभवत जस्तो लाग्ने धेरै राजनितिक क्रान्तिहरु काङ्ग्रेसले आफ्नै बलबुतामा सफलता र बहादुरीका साथ सम्पन्न गरेको छ । चाहे त्यो राणा शाही अन्त्य गर्दा होस वा पन्चायती तानाशाहीका बिरुद्ध किन नहोस काङ्ग्रेस आफ्नो प्रजातान्त्रिक रणकौशलता प्रदर्शन गरेको ताजा घटना कुनै नेपालीको मानसपटलबाट छिपेको छैन । अझ अगाडी बढेर भन्ने हो भने माओबादी नामको दस बर्षे जनयुद्धले देशलाई रगतको अहालमा डुबाएको अबस्थाबाट नेपालीलाई मुक्ति दिलाउने काम झट्ट हेर्दा असम्भव जस्तै देखिए पनि आखिरी काङ्ग्रेस कै पहल कदमीमा सफल भएको हो । ४÷४ कम्युनिष्ट प्रधानमन्त्रीले फत्ते गर्न नसकेको काम नेपाली काङ्ग्रेसले दुई बर्षमै संविधान निर्माण मात्रै होइन त्यसको सफल कार्यान्वयन पनि गरेर देखाइ दिएको अबस्था ताजै छ । यसर्थ प्रधानमन्त्री ओलिले जानिबुझीकन प्रतिगमनकारीको मतियार बनेर विघटन गरिएको प्रतिनिधिसभा र घोषित मध्याबधी निर्बाचनलाई लिएर अब काङ्ग्रेसमा रडाको मच्चाउनु र बिभाजन तर्फ उन्मुख छ भन्ने खालको भ्रामक सन्देश जाने आवाजहरुलाई रोक्नै पर्छ । यो समय एकबद्व भएर प्रस्तुत हुने समय हो । कुनै बहाना पनि एकतामा आच आउने काम कुनै पक्षबाट पनि हुनु हुदैन । अहिले पार्टी एक देखिएको छ तर पनि सामाजिक सन्जाल र कथित ठुला भनाउदा मिडियाहरुले नेपाली काङ्ग्रेसका सभापती विरुद्ध अनेक भ्रामक र कुप्रचार गरि रहेको देख्दा काङ्ग्रेसलाई टुटाउने र फुटाउने तत्वहरु कृयशिल रहेछन भन्ने प्रष्ट बुझ्न सकिन्छ । “धमिलो पानीमा माछा मार्ने”हरुले ठुला भनाउदा मिडिया र खुदै काङ्ग्रेसमा पनि चर्का र क्रान्तिकारी जस्ता देखिनेहरुको चक्रब्युहमा फस्नबाट जोगिनु पर्ने देखिन्छ । हालैको पछिल्लो राजनैतिक घटना क्रमःका सम्बन्धमा पार्टी सभापतिको स्पष्ट धारणा सार्बजनिक भएकै छन् र ती धारणालाई पार्टीले अपनत्व ग्रहण गरिसकेको छ ।यस्तो स्थिती मा पनि भ्रामक र अनर्गल अनि कुप्रचार खेदजनक छन् । नेकपाको संसद विघटन निःसन्देह असंबैधानिक र अलोकतान्त्रिक छ भनिएको छ भने अझ एक कदम अघि बढेर भन्ने हो भने उक्त विघटनकारि कदम सर्बसत्ताबाद र अधिनायकवादको धङधङी बाट चालिएको हो । यति हुदाहुदै पनि किन भ्रमको खेती गरिदै छ? के अब सभापतिले हनुमान झै छाती खोलेर देखाउन पर्ने हो ? यस्तै अबिश्वासका काला कर्तुतले पार्टीलाई कतै चिरा पार्न खोजेको भने हिम्मत गर्न पर्यो होइन भने “मोहि माग्ने ढुग्रो लुकाउने” किन ?
अब एक छिन सर्बोच्चको संबैधानिक इजलासमा बिचराधिन मुद्दाको बिषयमा चर्चा गरौ । राजनीतिमा सामान्य चासो राख्ने जो कोहिलाई पनि अबगत नै भएको कुरा हो सर्बोच्चलाई कुनै दबाब र प्रभाब पार्न दिनु हुदैन । बस, पार्टी सभापतिले स्वतन्त्र न्यायपालिकालाई दबाब र प्रभाब पर्ने गरि कुनै काम गर्नु उपयुक्त हुदैन भन्नू गलत हो भने भन्नु केही छैन । अन्यथा त्यही अभिव्यक्तिलाई आधार मानेर सभापति बिरुद्ध षडयन्त्र गरिएको हो भने त्यसको मूल्य चुकाउनु पर्ने हुन्छ । ल अब मानौ संसद पुर्नस्थापना भएन रे, अनि काङ्ग्रेस सडकमा तड्पी राख्ने कि हुने भनिएको चुनाबी तयारी जुट्ने प्रश्न यहाँनेर उठ्दछ । हो यहि बिषयलाई ध्यानमा राखेर पार्टी सभापति आफ्ना बिचारहरु राख्नु भएको हुनुपर्छ भन्ने प्रष्ट हुन्छ । यति सामान्य कुरा बुझेका छैनन त कसरी भन्ने तर बुझ भने पचाएकै हुन भन्दा अन्यथा हुने छैन । यसरी बुझ पचाएर आफ्ना कार्यकर्तालाई गन्तब्यहिन यात्राको चक्रब्युहमा फसाउनु निश्चय पनि प्रतिउत्पादक बाहेक केही हुदैन । होइन सर्बोच्चको संबैधानिक इजलासले संसद पुर्नस्थापना गरेन भने आन्दोलन नै चर्काउने हो भने संबैधानिक सर्बोच्चता मान्दिनौ, सडकबाटै संसद पुर्नस्थापना गर्छौ भन्दै आन्दोलन गरि राख्ने हो भने त्यस्तो आन्दोलनको नेतृत्व कस्ले गर्ने हो त्यो पनि निक्र्याैल हुनुपर्छ । के अब काङ्ग्रेस आफ्नो गौरबशाली इतिहासलाई कालो पोत्दै कम्युनिष्टको पछाडी लुरु लुरु हिड्ने हो ? जस्ले जे सुकै भनोस अहिले माहोल नेपाली काङ्ग्रेसको पक्षमा देखिदैछ । यो अनुकुल परिस्थितिलाई अरुको बहकाउमा लागेर उग्र क्रान्तिकारी भइदैन । नेतृत्वको गतिशिलता भनेको समय सापेक्षित र सटिक निर्णय लिनु हो । जुन निर्णय एक प्रकारले सभापतिले संकेत गरि सक्नु भएको छ । त्यही गतिशिलताबाट ईष्र्या गर्नेहरु सभापति विरुद्ध भ्रामक प्रचारबाजीमा तिब्रताका साथ लागेको प्रतीत हुन्छ । अर्को “काम कुरो एकातिर कुम्लो बोकि ठिमी तिर” भने जस्तै अहिले यत्रो ठूलो संबैधानिक संकट आएको बेला महाधिबेशनको प्रशङ्ग कहाँबाट कुन नियतले निकालिदै छ ? जहाँ कि त्यो संबैधानिक संकट ज्युदै छ । पहिलेले अप्रत्याशित जस्तो देखिने तर योजनाबद्व ढङ्ग ले ल्याइएको कुर्सी जोगाउने चाल र साथसाथै जनआन्दोलन २०६२÷०६३ का उपलब्धि संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नेपालको संविधान २०७२ लाई समाप्त गर्ने डिजाइन अन्तर्गतका असंबैधानिक र अलोकतान्त्रिक कदमको सम्बन्धमा सर्बोच्चले जे निर्णय गर्छ त्यही अनुरुप काङ्ग्रेस हिड्नु बाहेक सहज बिकल्प अर्को छैन । यदि सम्बिधान लिकबाट बाहिर गयो भन्ने हो भने चुनाबमा जनता सङ्ग त्यही मुद्दा लिएर जानू पर्छ र ट्र्याकबाट चिप्लिएको संविधान ठिक ठाउमा ल्याउनको लागि जनतासङ्ग जानुको बिकल्प खोज्नु हुदैन । तसर्थ नेपाली काङ्ग्रेसले प्रचण्ड–नेपालको पछाडी लागेर कार्यकर्तालाई अनिश्चयको भुमारीमा धकेल्नु भन्दा जनताका माझ नेकपाका कालाकर्तुतहरुको भण्डाफोर गर्दै निर्बाचनमा जादा नै जित हुने देखिन्छ यदि अहिले बनिबनाउ स्थिती नभत्काइकन जान सके । यो यथार्थतालाई साथ दिनु नै उत्तम बाटो हो । भुलेर पनि कार्यकर्तालाई अनावश्यक कम्युनिष्टको चक्रब्युहमा हुत्याउने काम नहोस् र भ्रमको खेती पनि छोडेर सहि सत्य कार्यमा लागौ । अन्यथा गन्तब्यहिन यात्राले राजनीतिक अन्योलको तुवालो हटाउन त्यति सहज हुने देखिदैन ।